15 Barnaamijyada Qishka Qarsoon ee loogu talagalay Android sanadka 2021 | Ogow Xaaskaaga -
Bogga ugu weyn 15 Barnaamijyada Qishka Qarsoon ee loogu talagalay Android sanadka 2021 | Ogow Xaaskaaga
Isha sawirka: iStock
Horumarinta teknolojiyadda, qofka aad jeceshahay wuxuu qarin karaa xiriirka isagoo gacan ka helaya taleefanka casriga ah. Barnaamijyada casriga ah ee Android waxay qarin karaan qoraallada iyo wicitaannada lammaanaha. Waxa runtii qarsoon ee ku saabsan barnaamijyadan khiyaanada qarsoon ee android waa sida ay u adag tahay in la ogaado haddii aadan aqoon iyaga.
Si aad u akhrido farriimaha ama u fiiriso wicitaannada taleefanka ee xiriirada aan la garanayn, waa inaad bilowdaa astaanta app-ka ee aan waxba galabsan oo aad gelisaa furaha sirta ah (haddii lammaanahaagu yahay mid goonni ah).
Barnaamijyadani waxay ku yimaadaan labada nooc ee lacag -bixinta ah iyo kuwa bilaashka ahba.
Hadda, aan eegno barnaamijyada khiyaanada qarsoon ee android.
Barnaamijyada Qishka Qarsoon ee adeegsadayaasha Android si ay uga eegaan taleefankiisa
Miyaad sii kordhaysaa dhalanteed oo aad ka shakisan tahay in lammaanahaagu khiyaameeyo? Barnaamijyada taleefankiisa qaarkood ayaa laga yaabaa inay tilmaamayaan gaalnimada. Waxaan diyaarinay liiska barnaamijyada khiyaamada qarsoon ee ugu sarreeya ee adeegsadayaasha android.
#1. Sanduuqa Fariinta Gaarka ah
Mid ka mid ah barnaamijyada khiyaanada ugu qarsoon ee android waa sanduuq farriin khaas ah. Waa lagama maarmaan in la qariyo farriimaha iyo caddaymaha.
Sanduuqa Fariinta Gaarka ah, xaaska ayaa si qarsoodi ah ula xiriiri karta gabal dhinac ah.
Barnaamijku wuxuu la imanayaa sifo kuu oggolaanaysa inaad ka qariso astaanta app -ka liiska codsiyada taleefankaaga. Marka, haddii aad qabato taleefanka lammaanaha, waxaa laga yaabaa in barnaamijkan la seego jaleecada hore.
Intaa waxaa dheer, waa pin-karti iyo 100% aamin ah. Sanduuqa Fariinta Gaarka ah wuxuu ilaaliyaa dhammaan wada sheekaysiga, sawirrada, iyo fiidyowyada. Waxay bixisaa iibsiyada gudaha-app si ay u iibsadaan lambarada dalwaddii, tani waxay ka ilaalisaa qoraallada biilka taleefankaaga gacanta.
Caddaynta biilka taleefanka gacanta laguma raadin karo iyadoo la adeegsanayo abkan.
Read ku saabsan Sida Loo Qariyo Barnaamijyada Android | Tilmaamo fudud iyo Tilmaan
Cinwaanka Ashley Madison waa “Noloshu waa Gaaban tahay, Leh Arrin” oo sheegaysa in adeegga loogu talagalay dadka waaweyn.
Kani waa dalabka khiyaanada ugu dambaysa ee adeegsadayaasha android. App-ku wuxuu ku faanaa isku-dheelitirnaanta caqliga iyo xirriirka furfuran.
Waxay leeyihiin sifo ragga iyo dumarka safraya. Marka, haddii lammaanahaagu ka baxayo magaalada, waxay diyaarin karaan inay sugaan wicitaan booliis ah.
Ashley Madison waa goobta/barnaamijka shukaansiga #1 ee lammaanaha khiyaameeya. Barnaamijkani waa caddeyn aan la dafiri karin haddii laga helo taleefanka gacanta lamaanahaaga.
#3. Kaydadka Vaulty
App -ka Vaulty Stocks app waa app khiyaano kale oo qarsoon oo loogu talagalay android. Isticmaalayaasha Android waxay u adeegsadaan barnaamijkan farriinta qoraalka gaarka ah.
Kaydadka Vaulty waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay diraan sawirro iyo fiidyowyo gaar ah oo ay ku qariyaan waxyaabaha ku jira god qarsoodi ah. Waa furaha sirta ah waxayna u baahan tahay biin si loo furo.
Haddii qof isku dayo inuu furo app -ka, abku wuxuu sawir ka qaadaa sawir ahaan si uu caddeyn u noqdo.
Sidaa darteed, haddii aad isku dayeyso inaad ka hesho taleefannada lammaanahaaga barnaamijyo khiyaamo qarsoon oo loogu talagalay android, iska jir astaantan amniga.
Viber waa barnaamij farriin ah oo u ekaan kara mid aan dhib lahayn, laakiin waa codsiga ugu fiican ee arrimaha.
Waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay abuuraan sheekado qarsoodi ah iyo wada sheekeysiyo si otomaatig ah u tirtiraya waqti cayiman ka dib. Barnaamijkan khiyaanada qarsoon ee loogu talagalay android, qof ayaa ku diri kara farriimaha, sawirrada, iyo fiidyowyada isaga oo aan raad ku reebin.
Haddii aad soo qaadato taleefannadooda oo aad baadho sheekaysiga, ma awoodi doontid inaad aragto wada sheekaysiga ay la leeyihiin haweenayda/ninka kale. Waxaad u baahan tahay biin si aad u aragto sheekaysiga qarsoon. Kani waa muujinta sheekaysiga qarsoon.
Kani waa barnaamij loogu jecel yahay khiyaameeyayaasha maxaa yeelay waxaa loo yaqaanaa inuu yahay codsi caadi ah wicitaanka caalamiga ah. Waxay si sahal ah ugu caddayn karaan soo dejinta sababaha shaqada, laakiin runtii waxay ka faa'iideysanayaan astaamaha sheekaysiga qarsoon iyo farriimaha baaba'aya.
Snapchat waxaa markii hore loo alifay inuu diro sawirro xunxun oo isla markiiba la waayo. Waxay ahayd beddel galmo -galmo maxaa yeelay farriimaha lama kaydin karo. Laakiin hadda, waxay kuu oggolaaneysaa inaad farriimaha diri karto.
Barnaamijkan khiyaanada qarsoon ee android inta badan waa la adeegsadaa sababta oo ah farriimaha is-burburinaya. Farriimahaasi waxay kaloo noqon karaan fiidyowyo waana sababta loogu adeegsan karo gaalnimada.
#6. Taariikhda Saaxiib
Taariikhda Mate waa barnaamij shukaansi oo loogu talagalay dadka raadinaya xiriir xagga hoose.
Barnaamijkan khiyaanada qarsoon ee loogu talagalay android iyo iPhones wuxuu adeegsadaa mashiinka goob-ku-saleysan oo leh farriin khaas ah oo toos ah. Laga soo bilaabo halkaas, adeegsadayaashu waxay la kulmi karaan oo ku xiri karaan qof u dhow.
Ugu dambeyntiina, barnaamijkan shukaansiga qarsoodiga ah uma baahna dadka isticmaala inay is -diiwaangeliyaan iyagoo adeegsanaya koontada warbaahinta bulshada ama bixiyaan lacag.
Akhri: 10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Furitaanka Telefoonkaaga
Qof kastaa wuu ogyahay in Tinder uu yahay app -ka shukaansiga ee isku xidhka. Aad-u-saaxiibtinimo leh, waxay u oggolaanaysaa isticmaaleha inuu dhex-maro sawirrada ay soo dhejiyeen dad juquraafi ahaan isku dhow.
Sidaa darteed, haddii aad ku aragtid barnaamijkan khiyaanada qarsoon ee android taleefankooda, waxaa laga yaabaa inaysan fiicnayn. Waxay si fudud ugu leexiyaan si sax ah si ay u helaan qof ay ku xiraan. Haddii qofkaasi sidoo kale si sax ah u boodo, waxay sameeyeen ciyaar. Isgaarsiinta oo dhan waa lagu samayn karaa, halkii la is dhaafsan lahaa lambarada taleefanka.
Marna ma heli kartid qaar ka mid ah barnaamijyadan qishka haddii si fiican loo qariyo.
KakaoTalk ayaa sidoo kale loo yaqaan KaTalk. Waa aalad isgaarsiineed oo lacag la’aan ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha taleefannada casriga ah oo labanlaab u ah app khiyaano qarsoon oo loogu talagalay android.
Waxay bixisaa wicitaan lacag la’aan ah iyo wicitaan fiidyow, farriin deg -deg ah, iyo astaamo kale sida wadaagga goobta, ciyaarta ciyaarta, iyo jadwalka.
Waxaad ka raadin kartaa dadka isticmaala magacyadooda, lambarrada taleefankooda, ama akoonnada emaylka. Tani waxay ka dhigaysaa app khiyaamo aad u fiican.
Mar labaad, waxay leedahay astaamaha maareynta xiriirada oo dhexgalaya liiska xiriirkaaga isla markaana si otomaatig ah saaxiibo ugu dara kalfadhiyadaada sheekaysiga markey internetka ku jiraan. Waxaad soo dejin kartaa oo dhoofin kartaa liisaska saaxiibbada oo aad arki kartaa saaxiib-kasta astaan-yar. Waxa kale oo aad iska diiwaangelin kartaa saaxiibbada aad jeceshahay.
Aamusnaanta waa codsi SMS/MMS oo kuu oggolaanaya inaad ilaaliso asturnaantaada markaad la sheekeysaneyso saaxiibbada. Adigoo adeegsanaya Aamusnaanta, waxaad u diri kartaa farriimaha SMS -ka iyo farriimaha oo aad la wadaagi kartaa warbaahinta ama lifaaqyada leh asturnaan dhammaystiran.
Fariimaha waa kuwo sir ah oo gudaha ah iyo farriimaha dadka kale ee Aamusnaanta ku qarsoon hawada.
Kani waa app khiyaano qarsoon oo qumman oo loogu talagalay android.
Kik waa codsi loo isticmaalo la -xiriirka saaxiibbada wada sheekaysiga kooxeed ama farriimaha tooska ah. Bilowgii, Kik wuxuu u eg yahay adeeg kasta oo fariin deg deg ah laakiin marka aad si dhow u eegto, waxay noqon kartaa barnaamijka khiyaanada qarsoon ee ugu fiican android.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad la sheekaysato shisheeyaha oo aad la gasho sheekaysiga fiidiyowga tooska ah, oo la mid ah Skype.
Kik wuxuu ku siinayaa fursad aad kula kulanto dad isku fikrad ah. Raadinta kooxaha dadweynaha, waxaad ka heli kartaa dad isku dan ah sidaada oo kale. Kooxaha qaarkood ayaa si gaar ah loogu diyaariyay dadka jacaylka raadinaya.
Is -qoritaanku wuxuu adeegsanayaa cinwaanka iimaylka iyo furaha sirta ah, isagoo diidaya baahida lambarka taleefanka.
Boorku waa qayb ka mid ah qalabka badbaadada dhijitaalka ah ee isgaarsiinta gaarka ah, raadinta shabakadda, iyo ilaalinta xatooyada aqoonsiga.
Marka farriin la tirtiro, weligeedba way tagtaa. Lammaanahaagu wax ma heli karo mar haddii aad tirtirto farriimahaas is diidan.
Kani waa ilaa iyo hadda ugu aaminka badan app qarsoodiga qarsoon ee adeegsadayaasha android ee adduunka. Dhammaan farriimaha waa kuwo sir ah.
Akhri: 11 Barnaamijyada Taleefoonka si aad lacag uga hesho mar kasta oo aad u baahato
Khadka ayaa ah beddel xooggan oo WhatsApp ah. Waxay bixisaa Voice bilaash ah wicitaanada IP -ga, wicitaannada fiidiyaha, iyo farriimaha deg -degga ah.
Isticmaalayaashu waxay iska diiwaangeliyaan lambarada taleefankooda gacanta iyagoo leh ikhtiyaarka wicitaannada lacag-bixinta ah ee aaladaha mobilada iyo adeegsadayaasha dhulka, marka lagu daro wicitaannada isticmaale-ka-isticmaalaha ah iyo farriimaha qoraalka
Isticmaalayaasha waxay la wadaagi karaan faylasha farriimaha badan xisaabaadka kale ee Khadka, oo ay ku jiraan duubista codka, faylasha fiidiyaha, iyo sawirrada.
Kani waa app khiyaano qarsoon oo qumman oo ay android u adeegsato inay ugu yeerto dadka aan ku jirin app -ka Khadka. Wicitaanadani ma aha bilaash. Halkii aad ku bixin lahayd daqiiqado qaali ah oo mobilada ah, waxaad isticmaali kartaa dhibcahaaga Khadka si aad ugu wacdo VoIP. Adeeggan waxaa lagu magacaabaa Line Out oo leh qiimayaal la awoodi karo.
Kani waa dalabka khiyaanada ugu fiican ee adeegsadayaasha android ee u adeegsada dalladda sheekaysiga ganacsiga si ay u khiyaameeyaan.
Aad bay ammaan ugu tahay sheekaysiga iyo wadaagga dukumiintiyada. Xataa qishka waa la kala saari karaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijkan.
Wire-gu wuxuu bixiyaa qaybta wada-shaqayneed ee ugu dhammaystiran oo ay ka muuqdaan farriin, cod, fiidyow, wicitaannada shirarka, wadaagga faylka, iyo wada-shaqaynta dibedda-dhammaantoodna waxaa ilaaliya qarsoodiga dhammaadka ilaa dhammaadka
Kani waa app aad loogu jecel yahay khiyaameeyayaasha maxaa yeelay wuxuu bixiyaa suurtagalnimada in lala xiriiro dadka ku nool aagga.
Waxay u shaqeysaa si la mid ah Instagram halkaas oo aad ku aragto tiro sawirro ah oo aad ku muujineyso qaddarintaada.
Barnaamijkan khiyaanada qarsoon ee android wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho dadka kuu dhow, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad dhaqaajiso astaamaha radar, kaasoo tusi doona sawirrada ragga ama dumarka kuu dhow.
Markaad hesho qofka ku habboon, adiga oo adeegsanaya adeegga sheekaysiga, waxaad bilaabi kartaa inaad si fiican u baratid oo aad aragto haddii ay ka soo baxaan filashooyinkeenna.
Codsi kale oo qish ah oo ku habboon tirtirka isgaarsiinta waa Signal. Kani waa app khiyaano kale oo qarsoon oo u muuqda mid aan dambi lahayn laakiin leh astaamo ka dhigaya mid ku habboon khiyaanada.
Barnaamijkani wuxuu tirtiraa dhammaan farriimaha iyo warbaahinta loo diray ama laga helay isticmaale cayiman oo gaar ah kadib waqti loo qoondeeyay.
Tani waxay la leedahay shuraako shucuur leh waxay ka faa'iideysan kartaa farriinteeda muuqaalka baaba'aya. Waxay asal ahaan u dejiyaan waqti go'an si ay ula xiriiraan kuwa jecel, marka waqtigan la dhaafo, farriinta ayaa soo baxda.
Waxay caan ku tahay inay haysato nabadgelyo la yaab leh, taasoo ka dhigaysa marmarsiiyo la rumaysan karo in tani ay tahay soo -dejin dhex -dhexaad ah oo loogu talagalay isgaarsiinta shaqada.
Akhri: 20 -ka Barnaamijyada ugu Wanaagsan ee Android ee aan la aqoon sannadka 2021 | Sahanka Guud
Waa maxay astaamaha Lammaanahaagu Qiyaanay?
Haddii aad ka hesho mid ka mid ah barnaamijyadan aan kor ku soo sheegnay taleefannadooda, u isticmaal astaamahan si aad u ogaato inay dhab ahaan khiyaamayaan.
Daraasaduhu waxay muujiyeen inay muujiyeen in app khiyaamadu sameeyo mid ama ka badan kuwan soo socda.
Marmarsiinyo ka dhiganaya si aan kaaga fogaanno.
Daryeel badan oo ku saabsan muuqaalkooda
Miyaanay kugu kalsoonayn sidii hore.
Isku dhawaansho jireed la'aan.
Wuxuu had iyo jeer helaa difaac ku saabsan waxyaabo yaryar.
Waxay kugu eedeeyaan khiyaano.
In kasta oo joogitaanka barnaamijkan khiyaanada qarsoon uusan damaanad u ahayn gaalnimada lamaanahaaga, haddana waxay yihiin tilmaamo hubaal ah in fiiro gaar ah loo baahan yahay.
Oo maya, suurtogal ma aha in lagu basaaso taleefanka lamaanahaaga adigoon rakibin software. Apps basaas had iyo jeer u baahan rakibidda software on phone bartilmaameedka. Marka laga reebo dhowr barnaamij oo loo isticmaali doono in lagu jabsado taleefanka xaaskaaga.
Si kastaba ha ahaatee, uma doodeynno taas. Waxay guriga ku dhalin doontaa xiisad, shaki iyo kalsooni darro.
20 -ka Barnaamijyada ugu Wanaagsan ee Android ee aan la aqoon sannadka 2021 | Sahanka Guud
Sida Loo Qariyo Barnaamijyada Android | Tilmaamo fudud iyo Tilmaan
Barnaamijyada Kuuban ee ugu Fiican ee loogu talagalay Isticmaalayaasha Android sanadka 2021 | Hadda Soo Dejiso
10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siinayo Soo Dejinta Barnaamijyada 2021 | Tilmaan Buuxo
Barnaamijyada Sida Bixinta | Barnaamijyada Iibinta Ugu Fiican Sanadka 2021 | Beddelka ugu Fiican
15 Barnaamijyada Shukaansiga Cougar ee ugu Fiican 2021 | Hel Shimbir Jacayl Qaangaadh ah
Waa imisa Darawalada Uber | 13 Darawalada Uber ee ugu mushaarka badan 2022
Si dadaal la'aan ah lacag u samaynta baabuur wadida kaliya waa riyo gaar ah Uber waxay keentay xaqiiqadan casriga ah…
Sida maahmaahda caanka ahi tidhaahdo, caafimaadku waa maal. Caafimaadka fayoobi waa qodobka ugu muhiimsan nolosha oo aan lahayn…